Johannesburg kuenda kuCape Town ndege paSouth African Airways izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Johannesburg kuenda kuCape Town ndege paSouth African Airways izvozvi
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kudzoka kweSAA kunopa yakawandisa musika zvakaenzana maererano nemitengo yetikiti. Sezvo mutakuri akapinda mukati uyezve kunze kwekununura bhizinesi kwave kune mashoma emunharaunda kugona uye zvinoreva kuti matikiti ave anodhura. SAA kudzokera kumatenga kunoreva mitengo yekukwikwidza uye kuchaita kuti maSouth Africa mazhinji abhururuke.
Mushure memwedzi yekugadzirira, South African Airways inotangazve zvese zvepamba nedunhu reAfrica basa.
Ndege yekutanga yeSouth Africa Airways inotanga kusimuka kubva kuJohannesburg ichienda kuCape Town musi waGunyana 23.
Ndege dzakagadzirirwawo kutanga kumaguta mashanu eAfrica - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka neMaputo.
Kutevera mwedzi yekugadzirira mushure mekubuda kununura bhizinesi, South African Airways (SAA) inotangazve zvese zvepamba nedunhu reAfrica basa. Mutakuri wekutanga
ndege yakarongwa kutanga mangwanani kubva kuOR Tambo International muJohannesburg kuenda Cape Town International munaGunyana 23 uye ndeimwe yevatatu vanodzoka nendege pazuva pakati pemaguta maviri. Ndege dzakagadzirirwawo kutanga kumaguta mashanu eAfrica - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka, neMaputo.
Mukuru weInternet weSAA, Thomas Kgokolo anoti, “Svondo rino inodada uye yakakosha kuSAA nevashandi vayo pamwe nevagari vese vekuSouth Africa. Rwendo rwedu rwekudzokera kumatenga haruna kuve nyore uye ndinopa rukudzo kuvashandi vedu vakazvipira munzvimbo dzese dzebhizinesi vese vane uye vari kuisa mumaawa mazhinji pamberi pezuva rino. Vanhu muzvinhu zvese zvebhizinesi havadi chimwe chinhu kunze kwekuti SAA ibudirire uye kuti isu tigadzire nendege nyowani zvichibva pakuchengeteka uye nemuenzaniso wevashandi. ”
Kgokolo anodaro apo South African Airways ine vavariro huru iri pamusoro pemitemo ichave iri yeane mutoro uye akangwara manejimendi manejimendi uye kuzvipira kujekesa. “Tinotangazve bhizinesi iri nemaonero matsva ekudada nechiratidzo uye rakasimbiswa mumushandi wese. Yedu yekutanga odhiyo yebhizinesi kushandira yedu
Sachigaro weBhodi reSAA, John Lamola anoti, “Kudzoka kweSAA kuchapa kuenzana kwemusika maererano nemitengo yetikiti. Sezvo mutakuri akapinda mukati uyezve kunze kwekununura bhizinesi kwave kune mashoma emunharaunda kugona uye zvinoreva kuti matikiti ave anodhura. Kudzoka kwedu kumatenga kunoreva kukwikwidza mitengo uye kunogonesa vanhu vazhinji vekuSouth Africa kubhururuka. ”
Lamola anodaro SaaKudzoka kumatenga zvakare iri guru rezvehupfumi rinogonesa, kunyanya nekutarisa kwakasimba kwendege dzekutakura zvinhu. “Economics padivi, pane zvakare kudada chinhu. Kuona mavara emuswe weSAA pamatare epasi rose haisi yakanaka kuSouth Africa chete asi nyika dzese. ”
Saa'Executive Interim: Commerce Simon Newton Smith anoti, "Tiri munzira dzakawanda, dimikira renyika; haina kugara iine nhoroondo yakapusa, asi inoshingirira, vanhu vayo vanozvikudza nenzira kwayo uye inyika isingafanirwe kurerutswa. Basa redu nderekuratidzira pasi rose kuti South Africa iri kuwedzera uye kutanga rwendo rwekupora zvizere uye zvirinani. Tiri kutangazve kuzvininipisa asi tine tarisiro huru. ”
Chief Pilot weSAA Mpho Mamashela anoti “Tese isu tichava pamberi pendege mumavhiki anouya nemwedzi tinonzwisisa zvizere chiratidzo chitsva cheSAA uye tinodada kuve chikamu cheiyi nyowani nguva. "Takatsunga kuva vakakwana zvakakwana uye kuita kuti maSouth Africa azvikudze."